Ihe Mgbakwasị ụkwụ China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ihe Mgbakwasị ụkwụ - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ihe Mgbakwasị ụkwụ)
2300mAh Li-na batrị batrị ọkụ ọkụ Atụmatụ: 1) Nchaji: Jikọọ chaja ahụ na insoles na eriri USB na nkwụnye. (Oge nkwụ ụgwọ: 3-4 awa) 2) Tinye ogologo bọtịnụ na-aga na insole ma pịazie I / II / III ọnọdụ iji chịkwaa ọkụ. M na-egosi na ala ala na-acha anụnụ anụnụ; II pụtara oge oyi na-egosi pink; III pụtara akwa ngosi...
Ihe Mgbakwasị ụkwụ Ihe mgbakwasị ụkwụ Ebe ụgbọala dị ọkụ Igwe Igwe ATV dị ọkụ Insoles dị ọkụ Na-egwu Mgbochi Maka Ọrụ Nkụkụ Ihe Nkpuchi Akpụkpọ ụkwụ 5200mah jaket dị ọkụ